Electronics - problemclean.com
Today, most electronic devices use semiconductor components to perform electron control. The study of semiconductor devices and related technology is consideredabranch of solid-state physics, whereas the design and construction of electronic circuits to solve practical problems come under electronics engineering. This article focuses on engineeringaspects of electronics.
250 products များ
Port Cat.6 Surface Mounted Box
Cat.6 U/UTP Patch Cord(0.5 m)
 Germany နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော UTP Cat.6 Cable ကို ကြိုးအရှည်အားဖြင့် (0.5 m, 1.0 m, 2.0 m, 3.0 m)
SUOBX Mini STARTER KIT
Voice GPS Tracker
ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ၊ ကလေး ၊ လူကြီး ၊ လိုချင်တဲ့နေရာ .. စိတ်ကြိုက်နေရာ ကအသံကို လွယ်လင့်တကူ ထောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် Voice GPS Tracker လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
1 mile2battery
8 Channel Wirless HD NVR CCTV Old model
$261.44 $300.50 -13%
မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယနေ့ ခေတ်မှာ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာကတာ့ လုံခြုံရေးအတွက် တပ်ဆင်ထားဖို့ CCTV Camera လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုခုကြောင့် ကိုမေ့နေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အလွယ်တကူပြန်ရှာဖို့ ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ် တခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်နိုင်ဖို့နဲ လုံခြုံရေးအတွက် အပြင်ရောက်ရင်တောင် မှလှမ်းကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။
1 - 12 မှ 250 items